तपाईं एक साँच्चै अचम्मको सौन्दर्य, भारत को लायक देखेर फोटो हेर्न चाहनुहुन्छ भने। यो देशमा प्रकृति यसको वैभवशाली अचम्मका छ, यो अनन्त पराउँछु गर्न सम्भव छ। राज्य इलाका मा व्यापक Woodlands वितरण। को हिमालय र को ढलान पूर्ण वनस्पति ढाकिएको छन्। भारतीय एशिया यसको ट्रपिकल वन लागि ज्ञात छ। तिनीहरूले बाक्लो crowns संग एक एकदम अग्लो रूखहरू द्वारा विशेषता छन्। ती किनभने, को पाठ्यक्रम, को काठ को सम्पूर्ण तल्लो भाग छायांकित छ। पेड मार्फत आफ्नो बाटो बनाउने, तपाईं प्रशस्त बांस thickets पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ।
भारत सबै समय यो यात्री आकर्षित गरेको छ मा आफ्नो रहस्य छ, एउटा धेरै रहस्यमय देश भनिन्छ गर्न सकिन्छ। र अब मानिसहरूले यसलाई चासो हराएको छैन। पर्यटकहरु यस देशमा यति धनी छन् जो ठाँउहरु, पराउँछु। यसलाई कसरी सुन्दर भारत शब्दमा व्यक्त गर्न असम्भव छ। धेरै लोभ्याउने हेर्न जो फोटो, आकर्षण, आफ्नो सौन्दर्य मा हडताली छन्।
भारत ती देशहरूमा जसको सांस्कृतिक सम्पदाको यात्री मा एक मजबूत प्रभाव पार्छ बीचमा छ। त्यसैले, बाँकी धेरै रोचक छ। प्रत्येक पर्यटक तपाईं अन्यथा समय गणना गर्न सक्दैन र सबै हेर्न समय छैन, एक यात्रा लायक छन् कि सबैभन्दा आकर्षक ठाउँमा सूची बनाउन सल्लाह छ।
त्यहाँ एक देश मात्र उल्लेखनीय सकिन्छ, तर ईश्वरीय छ भने, यो भारत हो। फोटो, साँच्चै इन्टरनेटमा आफ्नो पृष्ठहरूमा राखिएको ठूलो संख्या मा पर्यटकहरु Fascinate जो आकर्षण भनेर यो स्वर्ग रमाइलो गर्न मौका छ।
अचम्मको वास्तुकला, ताज महल
पहिले नै भारत सबै आफ्नो रहन को पहिलो दिन असामान्य कुरा बाहिर वास्तु शैली प्रचलित यहाँ। उपासनाको थुप्रै ठाउँमा विभिन्न उल्लेखनीय उपस्थिति हो: तिनीहरूले peculiar र आकर्षक आकार, र एक महान चित्रकला छन्। बस देशमा आइपुगे केही पर्यटकहरु, तुरुन्तै ताजमहल, आगरा स्थित भ्रमण गर्न खोज्छन्। यो वास्तु स्मारक लामो राज्य को एक प्रतीक मानिन्छ गरिएको छ किनभने यस्तो जोस, एकदम जायज छ, साथै, उहाँले नवीनतम मध्ये एक छ दुनिया को सात आश्चर्यहरू। दिन र रात, संगमरमर समाधि, अर्ध-रत्नहरू सबै प्रकारका संग पूरा, विश्वव्यापी ध्यान आकर्षित गरेको छ। यहाँ छ जो एक फोटो-रोक आनन्द एक शानदार स्थान जस्तो हुन सक्छ, त्यसैले सबै भारत, असामान्य छ।
Virupaksha मन्दिर र Harmandir साहिब
हरेक पर्यटक को Virupaksha मन्दिर Hampi मा रहेको रमाइलो गर्नुपर्छ। उहाँले समारोह प्रदर्शन गर्दै छन् जो आज सबैभन्दा पुरानो हिन्दु उपासना गर्ने ठाउँ, को छ। मन्दिर Harmandir साहिब यसको समृद्ध इतिहास को धेरै आकर्षण, सुन्दर पनि छ। यो बेला एक विशेष प्रकाश यसलाई अझ सुन्दर बनाउने, मा सरेका छ साँझ यो भ्रमण गर्न सिफारिस गरिएको छ। अन्धकारमा, यो सुनको चमक emanates, र यो धेरै पर्यटकहरु हेर्न चाहेको अचम्मको छैन। अक्सर मानिसहरू उत्प्रेरित कि भारत फोटो यस सुन्दर मन्दिर को लागि देश, प्रसिद्ध गएर सोच्न।
गोवा रोचक के छ?
गोवा भ्रमण गरेपछि, यसलाई सबै मेरो जीवन भूल असम्भव छ। त्यहाँ मनोरञ्जनको लागि धेरै अवसर छन्। गर्न पहिलो कुरा - जो धेरै यहाँ समुद्र तट को एक, मा जाने छ। विभिन्न Vagator र Palolem को असाधारण सौन्दर्य। पर्यटक उच्चतम एकाग्रता अन्तिम मा अवलोकन छ।
एक समुद्र तट छुट्टी प्राप्त नरमाइलो गर्दा, तपाईं येशूको Basilica जाने सक्छ, खैर, यो एक यूनेस्को सम्पदाको साइट हो। यो वास्तु स्मारक र गोवा धेरै यात्री आकर्षित गर्छ। भारत, जो फोटो वास्तविक आनन्द, साधारण उपासनाको ठाउँमा धनी उत्पादन।
Dudhsagar झरना, लन्डन + शहर
प्राकृतिक सौन्दर्य को प्रशंसकहरू अमेट छाप नाम जो अर्थ "दूध समुद्र" Dudhsagar भनिन्छ झरना, बनाउँछ। आफ्नो तथाकथित यो मा पानी एक असामान्य ह्यु छ किनभने।
लन्डन + शहर भ्रमण गर्न पर्याप्त भाग्यमानी भएकाहरूलाई पनि नरमाइलो लाग्यो हुने छैन। यो गाउँमा त्यहाँ जुन 18, ठूलो बजार छ मा एक सडक छ। त्यहाँ सबै कि आभूषण गर्न मसला को सबै प्रकार देखि एक व्यक्ति को लागि आवश्यक छ किनभने उत्सुक देश धेरै आगंतुकों, यहाँ आउन। भारत, जो को फोटो उज्ज्वल रंग, सामान को एक ठूलो विविधता संग बजार को एक किसिम को सामान्यतया भरिएका छन्।
यो भ्रमण गर्न सिफारिस गरिएको आकर्षण मात्र एउटा सानो अंश हो। तर, माथि आकर्षण सबै पर्यटकहरु परिचित हुनुपर्छ जो एक न्यूनतम, मानिन्छ। भारत, अक्सर कला काम सकिन्छ फोटो जो हरेक यात्री को हृदयमा गहिरो छाप छोड्छ।
आकर्षण Braslava: विवरण, इतिहास र रोचक तथ्य
Spaso-बेथानी विहार, Sergiev Posad: इतिहास, फोटो, ठेगाना, दिशा निर्देशन
प्यानकेकहरू कसरी बनाउने जान्न चाहनुहुन्छ? यहाँ केही सुझावहरू छन्!
कसरी "म्यानपार्क" र यो के लागि साइन इन गर्नुहोस्
संसारको सबै भन्दा प्रसिद्ध ओपेरा गायक